Must have softwares for your PC- စာမျက်နှာ2— MYSTERY ZILLION
မ Drnt အတွက်ပါ။ ကျန်တာတွေ တင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြီးမှ လင့်တွေကို ပြန်စုပေးပါ့မယ်။ Ulead video studio က size အရမ်းကြီးတယ်ဗျ။ 800 MB လောက်ရှိတယ်။ အမ ဒေါင်းလို လွယ်ပါ့မလားမသိဘူး။ အဆင်ပြေမယ် ဆိုရင်တော့ တင်ပေးပါ့မယ်။ zshare က အဲ့ဒိလောက် File size ကြီးသွားရင် ဒေါင်းလိုမကောင်းလိုပါ။ လိုချင်တဲ့ hosting လေးပြောပြစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
Name-Total Video Converter Pro
Name-Spy Emergency 2008
Size-Part 1 56,320 KB= 55.00 MB
Part250,216 KB= 49.04 MB
Powerdvd က ဖိုင်ဆိုက်ကြီးလို နှစ်ပိုင်းခွဲတင်ထားပါတယ်။ ပြန်ပေါင်းဖိုက လွယ်လွယ်လေးပါ။ ဒီဖိုင်နှစ်ခုကို တနေရာထဲမှာ ထားလိုက်ပြီးတော့ Part 1 ကို ဖြည်လိုက်ယုံပါပဲ။သူ့ဟာသူ ပေါင်းသွားမှာပါ။
ကဲ ဒီမှာ အမတောင်းထားတာလေးတွေ ရပြီနော်။ အဆင်မပြေရင်ပြန်ပြောပါ ခင်ဗျ။
Part1 = 50MB
Part2 = 50MB
Part3 = 41.09MB
http://www.mediafire.com/file/zmnq4bbfxod/Ulead Video Studio 11 Plus Full.part1.rar
http://www.mediafire.com/file/lzlji2nrmbu/Ulead Video Studio 11 Plus Full.part2.rar
http://www.mediafire.com/file/xsywp1pwjjf/Ulead Video Studio 11 Plus Full.part3.rar
this software is not activated
I like this software so, please help me for full version.
I was click the patch file at the program directory.
but it's not activate the program. It's asked me activation key for full version.
patch program is done. but program is not activated.
speetconnect ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပီးတော့လေ ဘာဆက်လုပ်၇မယ်မှန်းမသိလို့..:106::O
Thank u for ur help, bro.
Wishing to long life of MZ, which is only reliable and essential for Burmese IT surrounding. I appreciate what have u done.:41::41::41:
thank for ur help, bro. :41::41::41:
ဒီ software ကိုသုံးကြည့်လိုက်။ သင့် computer ဒုံးပျံစီးနေသလား အမှတ်မှားသွားလိမ့်မယ်။
SpeedUpMyPC вЂ“ the award winning utility software that ensures your PC is automatically optimized for maximum performance in justafew easy clicks.
Do you often notice that your PC just doesnвЂ™t run as smoothly as it used to? This could be caused by anyone of several problems oracombination of all of them. The problem is,
monitoring todayвЂ™s PCs is increasingly difficult and time consuming. Even experienced users find effective control of all the settings and resources of their PCs hard to achieve.
With SpeedUpMyPC 3, itвЂ™s as though you haveafull time technician working flat out just for you, helping you to make the best use of all that processing power that you have
already bought. SpeedUpMyPC3lets you monitor and control all your PC
all automatically scanned, cleaned and optimized for peak performance. You can also selectively disable or remove unnecessary background and auto-start processes to cut
Sensitive data can be permanently put beyond recovery using the File Shredder, while browsing history and cookies can be completely deleted to protect your privacy, from others
who share your PC as well as from hackers. A powerful Uninstall feature lets you totally remove unwanted software much more efficiently.
An easy to use, award-winning user interface that lets you tweak your settings withasingle click or lets you navigate and adjust specific settings quickly and easily in justafew
ဒီ software တကယ်အရမ်းကောင်းရင် Istein တော်လို့ဖြစ်ပြီး မကောင်းခဲ့ရင်တော့ software ဆွဲတဲ့ Programmer ညံ့လို့ဖြစ်ပါတယ်
သင့် Computer ကိုအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ ပုဂံလုံးစီးစေချင်လျှင်တော့
PC Booster 2008 Speed up Your PC
ကိုတက်လူကို ကျနော် တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။ ကျနော်က Babylon7ကို ကိုတက်လူပေးထားတဲ့ လင့် ကနေယူသုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗမာလိုမမြင်ရပါဘူး။ နောက်ပြီး ကျနော့မှာက အင်တာနက်မရှိတော့ သူ့အတွက်လိုတဲ့ ီDictionary file (BGLs file ထင်ပါတယ်)တွေကို ဘယ်မှာ download လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ သူပေးထားတဲ့ oxford dictionary က online ဖြစ်မှ သုံးလို့ရမှာလို့ပြောထားလို့ပါ။ နောက်ပြီး ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Longman activator လေးပါရရင် တော်တော်လေးပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ကျနော် လင့် တစ်ခုရထားတယ် ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူး။ အဲ့ဒါလေး ဖြစ်နိုင်ရင် ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာ။ အင်္ဂလိပ်စာ Learner တွေအတွက် Longman acitvator ရှိမှ စာရေး စာဖတ်ရတာ တစ်ကယ့်ကို အရသာရှိတာမို့လို့ပါ(ကျနော့စိတ်ထင်နော်)။ http://rapidshare.com/files/144876596/Babylon_LDOCEng4thEd.rar
hninziphyuphyu wrote: »
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ပိုပြီး crack ရလွယ်တဲ့ ဖိုင်ကို မူရင်းလင့်မှာပဲ အသစ်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျား။ ဒီတခါတော့ လွယ်လွယ်လေးပါပဲ။ Patch ထဲက ဖိုင်နှစ်ခုကို copy ကူးပြီး C:\_Program Files\_CBS Software\_SpeedConnect Internet Accelerator အောက်မှာ paste လုပ်လိုက်ပါခင်ဗျား။ ပြီးရင် software ကို run လိုက်ပြီး email & key တောင်းရင် keygen မှာ email တခုထဲ့ပြီး key create လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဲ့ဒိ key ကို ထဲ့လိုက်တာနဲ့ activate ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျား။ အဆင်မပြေရင် ပြန်ပြောကြပါ။ အဲ့ အသုံးပြုပုံကလဲ အလွန်လွယ်ပါတယ်။
Step 1: Select Connection Type မှာ မိမိ အသုံးပြုနေတဲ့ connection အမျိုးအစားကို ရွေးပေးပါ။ PPOE connection ကိုရွေးပေးပါ။ Step2မှာ Automatic Optimization mode ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် Bandwidth ကိုမရွေးရပါ။
Step 2: Choose Optimization Mode မှာတော့ Automatic ပဲထားပါ။ Step 1 မှာ Bandwidth ကိုရွေးပေးလိုက်ရင်တော့ Optimization Mode က သူ့ဟာသူ ပြောင်းသွားမှာပါ။ Automatic ပဲကောင်းပါတယ်။
Step 3: Select Network Adapter to optimize မှာ မိမိ အသုံးပြုနေတဲ့ Network Card ကိုရွေးပေးပါ။ Wireless ကိုသုံးတဲ့ လူကလဲ wireless adapter ကိုရွေးပေးပါ။ Dial-up သမားကလဲ Dial-up modem ကိုရွေးပေးပါ။
ပြီးရင် Optimize button ကို click လုပ်ပါ။ ပြီးရင် Apply Changes ကို click ပါ။ Restart ချခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ Restart လုပ်ပြီးရင်တော့ Installation ပြီးပါပြီ။
You are welcome sis.:67:
အကိုရေ။ Babylon thread က ကျွန်တော်နောက်ဆုံး တင်ထားပေးတဲ့လင့်မှာ Offline dictionaries တွေတော်တော်များများကို ပေါင်းထဲ့ပေးထားပါတယ်။ Oxford offline ပါ ပါပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုက်က ကြီးနေလို ကျွန်တော်မူရင်းလင့်မှာ Update မလုပ်တာပါ။ ဒီမှာယူပါ။ Installation Manual ပါ ပါပါတယ်။
မြန်မာလို ပေါ်ဖိုကတော့ အကိုစက်မှာ Zawgyi ရှိဖိုလိုပါလိမ့်မယ်။ Zawgyi Font ကိုသွင်းလိုက်တာနဲ့ မြန်မာလို မြင်ရမှာပါ။ အကိုပေးထားတဲ့ လင့်ကိုတော့ ကျွန်တော် စမ်းလိုက်ပါဦးမည်။ dictionary တွေ ဒေါင်းချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီလင့်ကနေ ဒေါင်းပါ။
u can findalot of free software in www.filehippo.com.
အကိုရေ ကျွန်တော် စမ်းပြီးပါပြီ။ အကိုပေးထားတဲ့ လင့်က Longman Dictionary of Contemporary English (4th Ed) ပါ။ ဒါပေမဲ့ သုံးလိုမရပါဘူး။ Crack လုပ်မထားပါဘူး။ ကျွန်တော့ Babylon Crack က Dictionaries တော်တော်များများကို crack လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ လင့်ထဲက premium dictionaries တွေအားလုံးကို crack နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ longman ကိုစမ်းတာတော့ မရပါဘူး။ ကျွန်တော် Longman Cracked Version ရှာပြီး ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။
Do you often notice that your PC just doesn’t run as smoothly as it used to? This could be caused by anyone of several problems oracombination of all of them. The problem is,
monitoring today’s PCs is increasingly difficult and time consuming. Even experienced users find effective control of all the settings and resources of their PCs hard to achieve.
With SpeedUpMyPC 3, it’s as though you haveafull time technician working flat out just for you, helping you to make the best use of all that processing power that you have
ကိုအိုင်းစတိုင်းရေ။ Uniblue Speedup My PC ကကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Firefox3နဲ့ match မဖြစ်ပါဘူး။ Firefox ကို tweak လုပ်လိုက်တာနဲ့ Firefox က ပက်ကျိက အဘခေါ်ရလောက်အောင် နှေးသွားပါတယ်။ Vista မှာဆိုရင် System tweak နဲ့ Connection tweak တွေကလဲ ဒီလိုပါပဲ။ လုပ်လိုက်မှ ပိုလေးသွားပါတယ်။ ကျွန်တော် Uniblue products တွေကို တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ Driver Scanner တို Registry Booster တိုပေါ့။ ဒါပေမဲ့ Speedup My PC ကိုတော့ သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။ ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော် ကိုအိုင်းစတိုင်း ။ သိတာလေး ဝင်ပြောတာပါ။:67::67:
ကျနော့စက်မှာ ဇော်ဂျီရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ သိပ်ပြဿနာမရှိပါဘူး။ Eng to Eng နဲ့လဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ သိချင်တာလေးတစ်ခုကြောင့်ပါ။ ရတော့လဲ ပို အဆင်ပြေတာပေါ့။ Longman တော့ အရမ်းလိုချင်တယ်ဗျာ။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ရှာကြည့်ပေးပါနော်။ တွေ့တော့တွေ့တယ်ဗျ။ ကျနော်ကလဲ ကွန်ပျူတာ သိပ်မကျွမ်းတော့ မစမ်းရဲဘူး။ လင့်တွေက ကိုယ်မသိတဲ့ ဆိုဒ်တွေကများတယ်။
Keygen for Uniblue Speed Up My PC 3.5.2435.209
Uniblue Speed Up My PC 2009 4.0.0.1 1.84MB
PC Booster 2008 v1.0.0.2 ( Retail Version ) 5.97MB
All are MF links!!
ကျွန်တော် လည်းဆော့ဖ်၀ဲလေးတစ်ခုလောက်လိုချင်လို့တောင်းမယ်နော်... ကျွန်တော်လိုချင်တာကတော့
All in One keylogger ပါ.. ဖူးဘားရှင်းလေးလိုချင်ပါတယ်ဗျာ......... ကျွန်တော့် ရုံးမှာ သုံးဖို့ပါ.. ကျွန်တော့စက်ကို သူများတွေက လာလာသုံးသွားလို့ပါ. ပြီးရင် လျှောက်လုပ်ကြလို့... ဘယ်သူက ဘာတွေ လုပ်သွားတယ်ဆိုတာ သိချင်လို့ပါ.. ကျွန်တော် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးစမ်းကြည့်တာကောင်းပါတယ်.ဒါပေမဲ့trial ဖြစ်နေလို့ပါ..
You should use Golden Eye. It also can take the Screen Shoot. And can record all the inputs from keyboard. If you lucky, you can also get his/her g-talk password.
အကိုရေ။ ကျွန်တော် KGB နဲ့ Ardamax keylogger full version နှစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် မေတ္တာရပ်ခံချင်တာတခုက သူတစ်ပါးအကျိုး ထိခိုက်စေမဲ့ နေရာမှာ အသုံးမပြုပါနဲ့ခင်ဗျား။ Admin များနေနှင့်လဲ မသင့်တော်ဘူးထင်ရင် ဖျက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
I would like to request all of the MZ members not to use key logger to stealth other people email password. In Yangon there are so many victims of key logger. If some one use key logger and stealth other password, he is not hero, he is only thief. Some people think that they are hacker to stealth other password. If you want to know the feeling of key logger victim, please ask Ko Sithu Aung. Using tolls that is invented by other people and breaking privacy is not hacking. The person to do such low standard work is stupid asshole.
USE YOUR FLASH DRIVE (like pendrive) AS RAM!
eBoostrв„ў is an alternative solution to VistaвЂ™s ReadyBoost and SuperFetch technologies now available on Windows XP
Someone is asking Internet usage logging or something like that I think this is what he wants.
အခြား hosting တစ်ခုခုတင်ပေးပါလား
ကိုတက်လူ ဖိုင်တွေ မျှပေးတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ပို.စ်တွေ ကများနေပြီး ရှာရတာခက်နေတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပါလား၊ အဲဒီ must have software နဲ. links တွေကို စုပြီး ebooks ပုံစံတင်လိုက်ပါလား။ ပြီးတော့ ဆော့ဝဲလ် တစ်ခုစီ ရဲ. အလုပ်လုပ်ပုံကို အတိုချံူး ရှင်းပြပါ။ ဒါဆို မလိုတာဆို ဒေါင်း စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
ဖိုင်လည်းမထည့်ထားဖူး။ html ဖိုင်ဖြစ်နေတယ်။ ပြင်ပေးပါဗျို.။
rapidshare link ရှိရင် ပေးပါ။
အကိုရယ်။ ဖိုင်ရှိပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တောင် ပြန်ဒေါင်းပြီးစမ်းပြီးပါပြီ။ ဘယ်လိုများ ဒေါင်းလိုက်တာတုန်း မသိ :106:။ လူ ၅၅ ယောက်တောင် ဒေါင်းပြီးပါပြီ။ ထင်တာတော့ connection problem ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကဲဒီမှာ rapidshare မှာပါ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖိုင်ချင်းက တူတူပါပဲ။အဆင်ပြေတဲ့ ဆီက ဒေါင်းပါ ခင်ဗျား။
အကိုရေ Ebook ပုံစံလုပ်ဖိုဆိုတာက မလွယ်ဘူးဗျ။ ဘာလိုလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်က အမြဲ Update လုပ်နေတာလေ။ ပြီးတော့ Review ကလဲ သူများတောင်းတာမဟုတ်ပဲ ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ ထူးခြားတဲ့ Software တွေအားလုံးလိုလိုမှာ ရေးပေးထားပါတယ်။ တချို Software တွေကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသား မလိုလို မရေးတော့တာပါ။ ဥပမာ PowerDvd လိုမျိုးပေါ့။ပြီးတော့ ကျွန်တော် Post တွေမှာ ခေါင်းစဉ်တွေ တပ်ပေးထားပါတယ်။ MZ search က အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အကို မယုံရင်ရှာကြည့်ပါ။ တင်ထားတာ ရှိရင် တွေ့ကိုတွေ့မှာပါ။ ကိုစေတန်တောင် MZ search နဲ့ပက်သက်ပြီး သူ့ဘလော့မှာ အရင်က Post တခုရေးဖူးပါသေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလိုအကြံညဏ်ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ကျွန်တော် zshare နဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Download Eboostr.pro.v2.0.417 from mediafire. ( 1.41MB )
Dear tat luu,
please find for me above that software. I have to survey the internet connection up link and down link speed.So, I need the the bandwidth monitoring software. Please help me. I don't forgot your help. I haveto report to my md. so, help me.....
အစ်ကိုရေရှေ့မှာ ဖြေပေးထားတယ် ... ကြည့်လိုက်ပါအုံး..........
ကောင်းတယ်ဗျာ :6:လုပ်ပေးတဲ့သူကတော့ နဲနဲအလုပ်ရှူပ်မှာဘဲ :39:
ဟိုက် သေရော ....။ ငါဒါမမြင်လိုက်ဘူး ဆောတီး ဆောတီး ကိုတက်လူရေ အစ်ကိုပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ် ။
ဒီ Software က Window Vista မှာ partition ခွဲဖို အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူများအတွက် အဆင်ပြေမှာပါ။ Partition Magic 8 က Vista မှာ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒီ Software ကတော့ 100% Vista မှာ အလုပ်လုတ်ပါတယ်။ အားလုံးနှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို မျှော်လင့်ပါတယ်။ Cracked Version ပါ။
Name-Paragon Partition Manager
ကိုတက်လူ အစ်ကိုတင်ထားပေးတဲ့ထဲက SpyEmergency2008 ကလေ ။ ကျွန်တော်သုံးရတာကြိုက်တယ် အစ်ကိုတက်လူ။ ဒါပေမဲ့ online ချိတ်လိုက်ရင် License expired ဖြစ်သွားရော ... ။ ကျွန်တော်အရင်ကသုံးဖူးတဲ့ Bitfender လဲအဲလိုဖြစ်တာ Automatic Update ကို ဖြုတ်လိုက်တယ် အဆင်ပြေသွားတယ် ။ SpyEmergency ကတော့ ဘယ်နားမှာမှရှာမတွေ့လို့ အစ်ကိုရေ... expired ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ် ။ နောက်တစ်ခုက သူက Virus Update ကိုတန်းဆွဲတာဘဲ ချိတ်လိုက်တာနဲ့ ပြီးရော expired ဖြစ်ရော ။ ကျွန်တော် offline update လုပ်လို့ရမလား ။ ရရင် ဘယ်နားမှာ download ဆွဲလို့ရမလဲ
hello ko tat lu.
can i get virtual hard-disk software. i wanna learn raid. plz help me.
patch 2.3 ကို run လိုက်ပေမဲ့ eBoostr 2.0.2 က trial version ဘဲ ဖြစ်နေလို့.:((
အကို အဲဒီလို link တွေတင် ပေးထားတာ တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျ....
ကျွန်တော်တို့လို လိုတဲ့သူတွေအတွက်က တော့ ကွက်တိပဲ။
နောင်လည်း ဒီထက်မက အများကို ကူညီနိုင်ပါစေဗျာ...
ကျွန်တော့်မှာ အခုAlcohol 120% 1.9.7 ကပြသနာ တက်နေတယ်ဗျ...
expire ဖြစ်နေပြီလေ....။National CD ဆိုင်က patch file ပါတာ၀ယ်ပြီး patch ဖြည်တာလည်း မရဘူးဗျ။
expire ဖြစ်ပြီးမှ patch ဖြည်လို့လားမသိပါဘူးဗျာ....။
သုံးလို့မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါသုံးတိုင်းသုံးတိုင်း patch ပြန်ဖြည်နေရတယ်။
ဒါမှမဟုတ်...အခုလိုပဲ patch ပါ download လုပ်နိုင်မယ့် link လေးကို တင်ထားစေချင်ပါတယ်။:106:
ကျွန်တော့်မှာတော့ Alcohol 120% 1.9.6 ပဲရှိတယ်။ သူ့မှာ keymaker ကော serial ကောပါတယ်။ လိုချင်ရင်တော့ အောက်က link ကနေ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
Alcohol 120% 1.9.7 တွေ့ပါပြီ။အောက်ကနေဒေါင်းလိုက်ပါ။
download လုပ်ဖို့ link မတွေ့ဘူးဗျ။ အစ်ကို့ site မှာကလည်း ရှာလို့မရဖြစ်နေတယ်။ပို့မယ့်ပို့တော့လည်း ကတို့ရောက်အောင်တော့လုပ်ပေးပါဗျာ။ဘာပဲပြောပြော ကူညီတာတော့မပါဘူး။:106:
အကိုရေ။ အဲ့ဒီလို မနောက်ပါနဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော်မအားလို ကိုexiter ကစေတနာနဲ့ဝင်တင်ထားပေးတာပါ။ Download လင့်ပေးထားပါတယ်။ သူတင်ထားတဲ့ image လေးကို ကလစ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ ရော့ မတွေ့ရင် ဒီမှာယူပါ ခင်ဗျ။
ကိုတက်လူကော၊ကို exiter ကိုကောတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ... ။ ကျွန်တော်ကသိပ်မလုပ်တတ်ဘူးဗျ။တစ်မျိုးတော့မထင်လိုက်ပါနဲ့။
အခုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီဗျ။ ကျေဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့ ။ အစ်ကိုတို့ အဲဒီလို link တွေကို ဘယ်ရှာသလဲဗျ။ ကျွန်တော်လည်း ကောင်းတာလေးတွေ တွေ့ရင်ပြန်ပြီးဖောက်သည်ချချင်လို့ပါ။
အကိုရေ။ ရပါတယ်ခင်ဗျ။ Rapidshare ကလွဲလို ကျန်တဲ့ လင့်တွေက ကျွန်တော်တို ကိုယ်ဟာကို Upload လုပ်ထားတာပါ။ ကျွန်တော်တိုက Forum တွေကနေရှာတာပါ။ Rapidshare Search Engine တွေကနေလဲ ရှာပါတယ်။
ကျွန်တော် အများဆုံး အသုံးပြုတဲ့ Forum တွေက
I have 100% working new crack
please type the title so that i see clearly.